Galfata Moorquusa Saagi
Wabii moorquusaa tokko saaga.
Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfata Muurquussaa filadhu
Kuusdeetaa moorquusaa irraa
Qabiyyee galmee irraa
Wabii warra rikoordiiwwan moorquusaa irraa, galmee ammaa keessatti kuufaman saaga. galfati inni galmee keessatti kuufame, kuusdeetaa moorquusaa keessattti isa kuufame nidursa.
Galmee isa galfatoota moorquusaa of keessaa qabuu yammuu olkeessu, warraabiiwwanii walgittan dirree dhokataa galmee keessaa irratti ufmaan olkaa'amu.
Barreessaa fi mataduree guutummaan maqaa gabaabaa filatame sanaa, yoo jirataaniif, bakka kanatti nimul'atu.
Galmicha keessatti wabii moorquusaa saaga. Warraabbii haaraa tokko yoo uumtee, akka galfatatiis saaguu qabda, kana malee, yammuu galmicha cuftu warraabiichi nibadda.
Iddoo ddoo Warraabbii moorquusa haaraa tokko itti uumuu dandeessuuf, qaaqa Galfata Moorquusa Qindeessi bana. Warraabbiin kun, galmee keessatti qofaa kuufama. Warraabbii tokko gara kuusdeetaa moorquusaatti ida'uuf, Meeshaalee - Kuusdeetaa Moorquusaa filadhu.
Iddoo kuussa moorquusaa filatamee itti gulaaluu dandeessuuf, qaaqa Galfata Moorquusa Qindeessi bana.
Qacceeleewwanii, galafatoota moorquusa waliin hojeechuf.
Title is: Galfata Moorquusa Saagi